दुलहीनै बिहे गर्न जन्ती सहित दुलाहाको घर पुगेपछी… – Khabar Silo
सुन्दा अ’चम्म लाग्न सक्छ तर यो सत्य हो बंगलादेश मा एउटा एस्तो बिवाह जहाँ बेहुली ले जन्ती बोकेर दुलाहा को घर मा बिवाह को लागि पुगिन अहिले यो बिषय धेरै नै भाइरल भैरहेको छ ! १९ वर्षकि दुलही कदिजा अख्तर ले आफ्नो पाहुना हरुको लागि यस्तो गरेकी भने होइनन बंगलादेश का सबै महिलाहरु ले उनको अनुसरण गरुन भन्ने आशाले उनले एस्तो गरेकी हुन् ! यो देशमा शताब्दिऔं देखि विवाहका लागि दुलहा दुलहीको घर जाने चलन छ ।खदिजाले आफ्नो विवाहको घ टना भाइरल भएको केही दिन पछि बीबीसी बंगालीसँग भनिन्, ‘यदि केटाले विवाह गरेर केटी ल्याउन सक्छ भने केटीले किन गर्न सक्दिनँ ?’खदिजाले तारिकुल इस्लामसँग विवाह गरेकी छिन् ।यद्यपि, यो घटनाले कतिलाई प्रेरित गरेको छ भने कतिमा रोष पैदा गराएको छ ।
एक व्यक्तिले रिसाउँदै भनेका छन्, ‘दम्पत्ति र उनका परिवारलाई चप्पलले कुट्नुपर्छ ।’ यद्यपि, खदिजा र उनका दुलहाका लागि यो निकै सामान्य कुरा थियो , उनीहरु दुबै राम्रो काम गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् ।उनले बीबीसीलाई भनिन्, ‘यहाँ परम्परा मु द्दा होइन । यो महिला अधिकारको एउटा मसला हो । आज यदि एक युवतीले युवकसँग विवाह गर्न जान्छिन् भने कसैलाई केही क्षती हुँदैन ।’ उनले भनिन्, ‘यसको साटो, महिलामाथि दु र्व्यवहार कम हुनेछ । कुनै पनि व्यक्ति कोही भन्दा कम वा सानो हुँदैन ।’यी दम्पत्तिले जसरी विवाह गरे, त्यसको व्यापक वि रोध हुने उनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा थियो ।
यो विवाह गत शनिबार भारतको सीमामा अवस्थित एक ग्रामीण क्षेत्रमा भएको हो । यहाँसम्म कि उनीहरुका आफ्नै परिवारका सदस्य पनि सुरुवातमा यस्तो विवाहका लागि उत्सुक थिएनन् । यद्यपि, २७ वर्षीय तारिकुले अन्त्यमा परिवार राजी भएको बताए । आफूले कुनै पनि गल्ती नगरेकोमा उनीहरु ढुक्क छन् ।नव दम्पत्तिले भने, ‘अदालत, मस्जिदमा विभिन्न विवाह हुन्छन् । हामी धर्म अनुसार विवाह गर्छौं।’उनका अनुसार त्यहाँ एक काजी र साक्षी हुन्छन् । यस्ता विवाह पंजीकरण हुन्छ । त्यो विवाहको औपचारिकता हो । हामीले ठ्याक्कै त्यस्तै गरेका छौं ।
उनले भने, ‘मानिसहरुले के सोच्छन्, के भन्छन्, त्यो महत्वपूर्ण होइन । केही मानिसरुले भिन्न सोच्न सक्छन्, सबैका आ–आफ्नै धारणा हुन्छन् ।’ कस्तो छ परम्परा ? बीबीसी बंगाली संवाददाता संजना चौधरी भन्छिन्, ‘यहाँको परम्परा अनुसार दुलहा र उनका आफन्त दुलहीको घरमा जान्छन् । त्यहाँ विवाह समारोह आयोजना गरिन्छ र उत्सव मनाइन्छ । त्यसपछि दुलही आफ्नो परिवारसँग बिदा लिन्छिन् र दुलहाको घरमा भित्रिन्छिन् ।’ यो परम्परा वर्षौंदेखि जारी छ । यद्यपि, पश्चिमी बंगलादेशको एउटा जिल्ला मेहेरपुरमा केही भिन्न देख्न पाइयो । यहाँ दुलही आफ्नो परिवारका सदस्यसँग विवाह गर्न दुलहाको घर गइन् र विवाहपछि दुलहा, दुलहीको घरमा गए ।यो विवाहको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । थुप्रै पुरुषका लागि यो अपमानजनक हुनसक्छ । कतिले यो घ टनालाई अचम्मित गरिदिने किसिमको पनि भन्न सक्छन् ।
यहाँसम्म कि एउटा सानो गाउँमा विवाहको जस्तो घ टना भएको छ, त्यस्तो बंगलादेशको शहरमा अहिलेसम्म पनि भएको छैन । दम्पत्तीले विवाहित जीवनको सुरुवात एउटा ठूलो साहस देखाउँदै गरेका छन् । उनीहरुको आत्मविश्वासबाहेक यो एउटा साहसपूर्ण निर्णय थियो ।हालैका वर्षमा बंगलादेशमा समानताको दिशामा निकै प्रगती भएको छ । विश्व आर्थिक मञ्चका अनुसार लैंगिक समानताका मामलामा दक्षिण एशियामा बंगलादेशको श्रेणी उच्च छ । यद्यपि, गम्भीर मामला अझै पनि कायम छन् । १९ वर्षकी नुसरत जहाँ रफीको मृ त्यु संसारभरी चर्चामा रह्यो । उनले प्रधानाध्यापकविरुद्ध यौ¥न उ_त्पीडनको मु द्दा दर्ता गरेपछि उनलाई जिउँदै ज लाएर ह त्या गरियो ।यसैबीच संयुक्त राष्ट्रले विवाह गर्ने दुई तिहाई महिलाले आफ्नो जीवनसाथीको हातबाट हिंसाको शिकार हुनुपरेको बताएको छ जसमा गत वर्ष आधा महिलाले रिपोर्ट दर्ता गराए । र जब मुस्लिम बहुल देशमा शिक्षा, विवाह कानूनजस्ता विषयमा प्रगतिको कुरा भइरहेका बेला महिला अधिकार समूहले प्र तिबन्ध र प क्षपातको आ’रोप लगाउँछ ।
स्मरण रहोस्, बंगलादेश हाई कोर्टले गत महिना विवाहको फारमबाट कुमारी (भर्जिन) शब्द हटाउन आदेश दिएको छ । त्यसपछि अब महिलाले विवाहको फारममा भर्जिन भएको जानकारी दिन आवश्यक छैन । पुरुषले यस्ता कुनै पनि कुराको घोषणा गर्नुपर्दैन । तारिकुल र खदिजा आफ्नो विवाह लैङ्गिक समानताको दिशामा एक प्रतिगामी कदम हुनेमा आशावादी छन् ।तारिकुलले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई भने, ‘एक पुरुषले जे गर्न सक्छन्, त्यो महिलाले पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुराको सन्देश हाम्रो विवाहले दिने कुरामा म आशावादी छु ।’यदि यस्तो भएन छ भने पनि उनीहरु आफ्नो निर्णयले अत्यधिक खुसी हुनेछन् ।खदिजाले भनिन्, ‘हामीले विवाहमा असाध्यै रमाइलो गर्‍यौं । एजेन्सि
काठमाडौँ : नवरात्रको नवौँ दिन दसैँ घर वा पूजा कोठामा नौ दुर्गामध्येकी नवौँ देवीअर्थात् सिद्धिदात्री देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदै छ ।प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल नवमीअर्थात् दुर्गा पक्षको नवौँ दिन सिद्धिदात्री देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने वैदिक परम्परा छ । नवदुर्गा गणकी एउटी देवीको नाम सिद्धिदात्री पनि हो । सम्पूर्ण मुमुक्षुलाई मोक्ष प्रदान गर्ने हुनाले […]
मंगलबारका दिन भुलेर पनि यस्ता कामहरू नगर्नुहोला, जिवनमा कहिल्यै पनि फलिफाप हुदैन !
कुनै पुजा आजा गर्दा हामिले भगवन गणेशजीलाई सम्जने गरिन्छ मंगलबारको दिन भगवान गणेशजीको पूजा गर्दा मिल्ने छ । लाभै लाभ हरेक मानिसहरुले मंगलबार भगवान गणेशको पूजा गरेकै हुन्छन् । धर्म शास्त्रका अनुसार मंगलबारको दिन निम्न काम बर्जित गरिएको छ । धर्मशास्त्रका अनुसार यी काम मंगलबार गर्दा हाम्रो जीवनमा समस्या बढ्न सक्छन् । मंगलबार कुखुरा वा […]